Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-ITA Airways yenza iodolo yeenqwelomoya ezintsha ezingama-28 ze-Airbus
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Utyalo mali • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • abantu • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
I-ITA Airways yenza iodolo yeenqwelomoya ezingama-28 zeAirbus
I-ITA Airways, Umphathiswa omtsha welizwe lase-Italy, uye waqinisekisa umyalelo kunye ne-Airbus yeenqwelo-moya ze-28, kuquka i-A220s ezisixhenxe, i-11 A320neos kunye ne-10 A330neos, inguqulelo yamva nje ye-airliner ethandwa kakhulu ye-A330. Lo myalelo uqinisekisa iMemorandam yokuQondana ebhengezwe ngomhla wama-30 kweyoMsintsi ngowama-2021. Ukongeza, inkampani yeenqwelomoya iza kulandela izicwangciso zayo zokuqeshisa ii-A350s ukuncedisana nokuphuculwa kwezithuthi zayo.
“Namhlanje intsebenziswano yobuchule ne Airbus ithatha inyathelo elibalulekileyo eliya phambili ngokuqukunjelwa komyalelo esiwubhengeze ngoSeptemba ophelileyo. Ukongeza kwesi sivumelwano, amathuba okubambisana ngakumbi avele, ngokukodwa malunga nophuhliso lwezobuchwepheshe kwicandelo lezomoya kunye nedijithali, apho i-Airbus iyinkokeli yemarike. Konke oku kuyinxalenye yezenzo zokufezekisa iinjongo zethu zokuzinza kokusingqongileyo, ”utshilo uAlfredo Altavilla, uMongameli weSigqeba. I-ITA Airways.
“Siyazingca kakhulu ngokuba nentsebenziswano ne-ITA Airways ekwakheni ikamva layo lexesha elide ngobona bugcisa busebenzayo nobutsha Airbus inqwelomoya. Esi sivumelwano siyaxhasa I-ITA Airways iinjongo zoshishino ukuphuhlisa inethiwekhi eYurophu nakwamanye amazwe ngendlela ezinzileyo, "utshilo uChristian Scherer, iGosa eliyiNtloko lezoRhwebo kunye neNtloko ye-Airbus. Airbus Ngamazwe ngamazwe.
Ezi nqwelomoya zintsha zeAirbus ziya kwandisa eyokuqala I-ITA Airways inqanawa enenqwelomoya yesizukulwana esitsha esebenza ngcono kokusingqongileyo, ixhotyiswe ngobuchwepheshe bamva nje kunye neekhabhinethi zamvanje zokuqinisekisa ukusebenza ngokugqibeleleyo kwenqwelomoya kunye neyona nto ingcono kubahambi.
I-A220 kuphela kwenjongo yenqwelo-moya eyakhelwe ukuthengisa izitulo ze-100-150 kwaye idibanisa i-aerodynamics yangoku, imathiriyeli ephucukileyo kunye neenjini ze-turbofan ze-Pratt & Whitney zamva nje. Ngoluhlu oluya kuthi ga kwi-3,450 nm (i-6,390 km), i-A220 inika iinkampani zeenqwelomoya ukuguquguquka okusebenzayo. I-A220 inikezela ukuya kwi-25% yokutshisa amafutha aphantsi kunye nokukhutshwa kwe-CO2 kwisitulo ngasinye xa kuthelekiswa neenqwelomoya zesizukulwana sangaphambili, kunye ne-50% ephantsi yokukhutshwa kwe-NOx kunemigangatho yoshishino. Ukongeza, indawo yengxolo yenqwelomoya icuthwe ngama-50% xa kuthelekiswa nenqwelomoya yesizukulwana sangaphambili-isenza i-A220 ibe ngummelwane olungileyo kwizikhululo zeenqwelomoya.
I-A320neo Family lolona sapho lwenqwelomoya luphumeleleyo kwakha kwakho kwaye ibonisa i-99,7% yezinga lokuthembeka lokusebenza. I-A320neo ibonelela abaqhubi nge-20% yokunciphisa ukusetyenziswa kwepetroli kunye nokukhutshwa kwe-CO2 - I-A320neo Family idibanisa ubugcisa bamva nje obuquka iinjini zesizukulwana esitsha kunye nezixhobo ze-Sharklet tip tip. I-Airbus 'A320neo Family inikeza intuthuzelo engenakuthelekiswa kuzo zonke iiklasi kunye nezihlalo ezibanzi ze-Airbus' 18-intshi kuqoqosho njengomgangatho.
I-Airbus A330neo yinqwelomoya yesizukulwana esitsha sokwenyani, esakhelwe kwiimpawu ezidumileyo kwi-A330 Family kwaye iphuhliselwe itekhnoloji yamva nje i-A350. Ixhotyiswe ngekhabhinethi ye-Airspace enyanzelisayo, i-A330neo inikezela ngamava omntu ohamba yedwa kunye neenkqubo zokuzonwabisa zokuzonwabisa kwi-flight kunye noqhagamshelwano. Ixhaswe yi-injini ye-Rolls-Royce Trent ye-7000 yakutshanje, kwaye iquka iphiko elitsha kunye ne-span eyongeziweyo kunye ne-A350-inspired winglets, i-A330neo inika kwakhona inqanaba elingazange libonwe ngaphambili - kunye ne-25% ephantsi yokutshisa i-fuel kwisihlalo ngasinye kunabaphikisi besizukulwana sangaphambili. Enkosi kubungakanani bayo obulungiselelweyo obuphakathi kunye nokuguquguquka okugqwesileyo koluhlu, i-A330neo ithathwa njengeyona nqwelomoya ifanelekileyo ukuxhasa abaqhubi ekubuyiselweni kwabo emva kwe-COVID-19.